Singa 10 ilaina amin'ny famokarana atiny mahomby | Martech Zone
Wrike dia sehatra fiaraha-miasa ampiasaina hanamorana ny famokarana atiny ao anatin'ny fikambanana misy anao. Izy ireo dia miantso an'io ho motera misy atiny ary mamaritra ny singa folo - na avy amin'ny fikambanana na avy amin'ny lampihazo - izay mahatonga ny famokarana atiny ho mandaitra kokoa.
Inona no atao hoe motera atiny?
Ny motera atiny dia ny olona, ​​ny fizotrany ary ny fitaovana izay manome atiny avo lenta, kendrena ary tsy miovaova amin'ny karazana haino aman-jery isan-karazany, ao anatin'izany ny atiny bilaogy, webinars, ebooks, infografika, horonan-tsary ary slidesets.
Fividianana Executive - Satria mitaky enti-miasa ny fikarohana, ny fampandrosoana, ny famolavolana ary ny fanatanterahana programa marketing, dia tsy maintsy manana fividianana maharitra avy amin'ny mpitantana anao ianao.
Hevitra manodidina ny tetika - Fandaharana iray izay mampiditra anjara asa, teboka fanaintainana, fihaonambe ary hetahetan'ny mpihaino kendrena ho fidirana.
Hub misy atiny - Ny loharanon-karena afovoany izay ahitan'ny mpihaino anao ny atiny navoaka ary avy aiza no hampiroboroboana azy.
Mpamorona ny votoaty - ekipa olona afaka manoratra, manova, maka sary an-tsaina ary mitantana ny atiny.
Mpamorona sy teknisiana atiny - Mpamorona sary, mpamoaka horonantsary, manampahaizana manokana momba ny sary sy ebook izay mandray ny atiny ary mamadika azy ho kanto.
Fiaraha-miasa eo amin'ny haino aman-jery sosialy, doka, marketing SEO & Marketing - Tsy ampy ny fanaovana atiny lehibe, tsy maintsy manana ekipa sy stratregy hampiroboroboana izany ianao.
Fitaovana miasa, fitaovana fitantanana sy fiaraha-miasa - Fitaovana famokarana atiny toy ny Wrike izay ahafahanao miasa eo afovoany, manome andraikitra, fandaharam-potoana ary fankatoavana.
Editorial Calendar - ny fahaizana mandamina sy mampiseho atiny fohy sy maharitra amin'ny drafitry ny atiny.
Torolàlana ho an'ny feo sy marika - torolàlana momba ny marika sy ny fandefasan-kafatra azo zahana amin'ny mpamorona anao sy ny manampahaizana anao mba hiantohana ny tsy fitovizanao mandritra ny atiny vokarinao.
Analytics - sehatra hijerena ny fahombiazan'ny atiny tsirairay, ny fampielezan-kevitra tsirairay, ny ekipa tsirairay ary ny drafitra ankapobeny.
The Wrike Ny platform dia mifamatotra amin'ny Salesforce, Zapier, Okta, Bitium, Google Apps, Gmail, Apple Mail, Outlook ary koa manana rindrambaiko finday Android sy iOS manokana.
Mampiasa ny rohy ifandraisanay amin'ity lahatsoratra ity izahay, aza hadino ny misoratra anarana ary mandray Wrike ho an'ny kapila fitsapana!
Tags: app androidpaoma paomabitiumkalandrie atinymotera atinyfamokarana atinyGmailgoogle appsfampiharana iosoktatoe-tsainasalesforceWrikezapier
Inona no atao hoe dokam-barotra fampirantiana mivantana?
Anisan'izany ny sary Instagram nampitombo ny firotsahana tamin'ny mailaka 7x